Tababaraha xulka Argantina oo kor u qaaday hamiga…
(Yurub) 20 Maajo 2020. Taageerayaasha Barcelona ayaa ka cabsi qaba in Lautaro Martínez uu la jaan qaadi waayo qaab ciyaareedka kooxda reer Catalonia haddii ay dhacdo inuu yimaado garoonka Camp Nou, laakiin tababaraha xulka qaranka Argantina ee Lionel Scaloni ayaa laabta u qaboojiyay, wuxuuna tilmaamay in Lautaro uu aad ula mid yahay Luis Suárez.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay tababare Lionel Scaloni, waxaana uu yiri:
“Si fiican ayaan u aqaanaa Messi, waxaan saaxiib la ahaa koobkii adduunka ee 2006, waxaan la leeyahay xiriir gaar ah isaga, waana ku faraxsanahay tababarkiisa”.
“Messi waa ciyaartoyga ugu fiican taariikhda, markii uu hawlgab noqdo, waan ka qoomamayn doonaa, sababa la xiriira inaan sii arki doonin, kaliya ma ahan Argantina, laakiin sidoo kale Spain, Talyaaniga iyo kuwa kale”.
“Waxaan mar walba rajeyneynaa in ciyaartoy waa weyn ay sii wadi doonaan ciyaarista inta suurtogalka ah, Messi waxaa laga jecelyahay Argantina, waxaan ku arkaa tababarka, waxaan arkaa waxyaabaha uu sameynayo, tani ayaa waxay horey u cadeysay inuu yahay kan ugu fiican adduunka, oo ay tahay inuu wali sii ciyaaro, waa wiil cajiib ah”.
Intaas kaddib tababare Lionel Scaloni oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka hadlay Lautaro Martínez wuxuuna yiri:
“Ma fududa in laga soo wado Inter Milan, sababtoo ah waa koox weyn, waxayna leedahay madaxweyne xoogan”.
“Laakiin waxa aan dhihi karo ayaa waxay tahay in Lautaro Martínez uu aad ula mid yahay Luis Suarez, qof walbana wuxuu doonayaa inuu la saxiixdo isaga”. Ayuu yiri Lionel Scaloni.